Calanka.com – Israa’iil oo qaaday weeraro ay kaga jawaabeyso diyaaraddii dagaal oo laga soo riday: SAWIRRO
Israa’iil oo qaaday weeraro ay kaga jawaabeyso diyaaraddii dagaal oo laga soo riday: SAWIRRO
in Dibedda — By Admin —	February 11, 2018 -- 4370 Views
Milateriga Israa’iil ayaa sheegay inay qaadeen weeraro ballaaran oo ay ku bartilmaameedsanayaan xarumo milateri oo ku yaala gudaha dalka Suuriya oo ay kamid tahay hanaankii difaaaca cirka ee Suuriya iyo walibana bartilmaameed ay Iiran ku leedahay gudaha wadankaasi. Qaraxyo ayaa laga maqlay meel aan sidaasi uga fogeyn caasimadda Dimishiq.
Weeraradan ay qaaday Israa’iil ayaa imanaaya saacado un kadib markii diyaarad dagaal oo ay leedahay Israa’iil ay ku burburtay gudaha wadanka Suuriya, xilli la ganay gantaal nooca lidka diyaaradaha oo ay leedahay Suuriya.
Ciidammada Suuriya ayaa rasaas furay kaddib markii Israa’iil ay ku dhaqaaqday fal daandaansi ah, waxaa sidaas lagu baahiyay warbaahinta qaranka.
Bayaan ka soo baxay milateriga Israa’iil ayaa lagu sheegay in “diyaarad nooca qumaatiga u kaca ah ay horjoogsatay diyaarad aanay cidina wadin oo Iiraan leedahay oo laga soo kiciyay Suuriya kuna soo xadgudubtay Israa’iil.”
Waxa uu bayaankuintaasi ku daray in diyaaraddaasi durbadiiba la ogaaday “aadna loola socday ilaa laga hor istaagayba.”
Diyaaradda aanay cidina wadin ayaa waxaa lagu soo riday gudaha Israa’iil, waxaa sidaasi sheegay afhayeenka ciidammada Israa’iil, Janaraal Ronen Manelis.